Nchọgharị Injin Ọchụchọ: Industrylọ Ọrụ Ọhụrụ
Oh Uh… Google Na-ebupụta Industrylọ Ọrụ SEA
Satọde, Febụwarị 19, 2011 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Nchọgharị Injin Ọchụchọ. Younụla maka ya? Ị ga.
Izu a, SEO ụwa bụ tụgharịrị isi ala mgbe Google kpebiri idebe JC Penney site na ndeksi n'ihi spammy, backlinks bara ọgaranya nke achọtara na saịtị ndị ọzọ na-abụghị nke ya iji bulie ogo ya.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ dum na-eme ihe ịtụnanya, ọtụtụ n'ime anyị n'ime ụlọ ọrụ ahụ maara na nke a bụ omume a na-ahụkarị. Nke bu eziokwu bu na nsogbu a di na Google's Page Rank algorithm hapuru uzo buru ibu, na o dichaghi nke oma na ndi oru SEO gi ejighi ya. Ndị nọ n’ime ụlọ ọrụ ahụ na-akpọ ha ndị nzuzu, ndị ume ngwu na ndị anaghị akwụwa aka ọtọ. M ga-eche na ọtụtụ n'ime ndị nkatọ na-eme SEO nwere ụfọdụ isiokwu backlinks bara ụba na saịtị ọzọ na saịtị nke nyere aka mee ka ogo ha dị elu.
Backlinking na-bụ nnukwu ụlọ ọrụ. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike iji ọtụtụ narị puku dollar na ụlọ ọrụ backlinking wee mee ọtụtụ nde dollar na ahịa. Buru n’uche na n’agbanyeghi na omume rụrụ arụ o nwere ike ịbụ ịghọ aghụghọ ule, ọ bụghị iwu na-akwadoghị. Na eziokwu niile, enweghị m ike ịta ụta na ụlọ ọrụ maka ịkwụ ụgwọ maka backlinks.
Mụ na otu onye ahịa na-arụ ọrụ ugbu a na-ele anya ka asọmpi ha na-achịkọta ọtụtụ puku backlinks spammy kwa izu. Ha na-eti onye ahịa m ihe n'ọtụtụ puku okwu ma mee ego ha, n'ụzọ na-enweghị isi, pụọ na Mgbasa ozi Google. Iji gbakwunye mkparị na mmerụ ahụ, onye nchoputa ihe ọkụkụ ha na-esutu ọnụ nke Google mgbe niile ma were banyere aghụghọ na ụlọ ọrụ SEO bụ - niile ka ọ na-azụ azụlinks.
Gịnị ka m ga-agwa onye ahịa m? Ana m enye ha ndụmọdụ ka ha tinyekwuo ego na oge iji soro ndị na-achọ ịbịa na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ dị oke ọnụ, ọ na-ewe oge, ọ nwechaghịkwa nloghachi nke ịzụrụ backlinks ga-eme. Nke ahụ bụ ọgwụ siri ike ilo mgbe backlinking ụlọ ọrụ folks na-apụta na osisi ha na-enye ha ọrụ na akụkụ dị nta nke ego nke ndụmọdụ m.
Nke bụ eziokwu bụ na nke a abụghị nsogbu ụlọ ọrụ SEO, ọ bụ okwu Google. Site na iji ọkwa dị ukwuu na backlinks, Google emetọla onwe ya site na ịmalite ụlọ ọrụ otu ijeri dollar ebe ndị ọkachamara nwere ike ịme ha egwuregwu. Nzaghachi Google nwere ike njọ, n'agbanyeghị. Site na idobe JC Penney site na ndeksi maka okpu okpu azụ backlinking, Google emeela ka ụlọ ọrụ ọjọọ ka njọ, ndị Nchọgharị Injin Ọchụchọ ụlọ ọrụ.
Nke a bụ ụlọ ọrụ ga-eme nke ọma ma ọ bụrụ na Google ejiri usoro a na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme n'ọdịnihu. Industrylọ ọrụ na-azụkọ azụ ga-aga n'ihu na-eto eto - mana oge a ọ gaghị abụ backlink na saịtị gị, ọ ga-ahapụ ụzọ nke spammy, backlinks bara ọgaranya na saịtị gị. Ndị ndụmọdụ SEO ga-agbasi mbọ ike ka ị ghara ịhapụ ụzọ Google nwere ike ịchọta mgbe ị na-ahazi ndị ahịa ha, mana ha nwere ike ịmalite ịhapụ ụzọ doro anya maka ndị asọmpi.
Ugbu a nwa ojii SEO ndị ndụmọdụ nwere ngwa ọgụ ọzọ ha nwere. Mgbe ha na-arụ ọrụ ịbawanye ogo nke onye ahịa ha, ha nwere ike ịchụso mbibi ogo nke asọmpi ahụ. Nke a adịghị mma maka ụlọ ọrụ ahụ.
MGBE: SearchDex, ụlọ ọrụ SEO nke nyocha ahụ na JC Penney mechara chụọ ya ekwupụtala ihe ndị a:
SearchDex esonyeghi, ma ọ bụ kwado atụmatụ izu njikọ a kpọtụrụ aha na akụkọ New York Times. E wuru ụlọ ọrụ anyị na ụkpụrụ omume kachasị elu yana n'oge ọ bụla anyị etinyela ojiji nke atụmatụ njikọ na-ezighi ezi ma ọ bụ usoro egwuregwu ndị ọzọ n'ime mmemme maka ndị ahịa anyị. Usoro SEO nke SearchDex were n'ọrụ maka ndị ahịa anyị niile, n'oge gara aga na nke ugbu a, na-agbaso ntuziaka Webmaster Google. Site na akụkọ NYTimes, SearchDex na-enyocha na atụmatụ niile eji enyere ndị ahịa aka ịga n'ihu na-agbaso Google Webmaster Guidelines. Anyị na-eme nyocha nyocha iji gbalịa ịchọpụta isi mmalite na mkpali nke njikọ ndị edere na isiokwu ahụ. - Dave Chaplin, Onye isi ala
Tags: adịghị mma seoOké osimirimgbu mmadu search engineAụlọ ọrụ seo
Kedu onye na-achọ Injinia Nchọpụta Injin Gị?
5 omume ekwentị na-emebi ika gị
Feb 19, 2011 na 9:45 PM
Nwere ike ịkọwa ihe kpaliri saịtị ndị ọzọ a iji okwu ndị laymans mee?
You na-ekwu na ọtụtụ puku saịtị jikọtara na saịtị JC Penney nakwa na JC Penney kwụrụ ụgwọ maka ihe ùgwù a site na otu 3rd?
Nke ahụ ọ́ bụghị ụdị mgbasa ozi ọzọ?
Feb 19, 2011 na 9:51 PM
Ee, ikwuru eziokwu. JC Penney (n'amaghị ama ma ọ bụ n'amaghị ama) goro otu ụlọ ọrụ SEO nke mere ka ha nwee ogo site na nkesa njikọ dị oke nkenke - nke ahụ bụ ederede dị n'ime mkpado arịlịka dabara na isiokwu ndị ga-adọta okporo ụzọ na ibe.
Feb 19, 2011 na 10:38 PM
Daalụ maka nkọwa. Naanị m gara saịtị JC Penney. Ha ugbu a nwere Alexa na peeji nke ogo nke # 695 - bụghị a ọjọọ n'usoro na-atụle e nwere ọtụtụ nde internet saịtị na ụwa niile na-azọ maka gị eyeballs. Onwe m adighi-ahu ihe esemokwu site na iji SEO ka backlink gaa na saịtị dika ị kọwara ya.
Feb 19, 2011 na 11:38 PM
Anyị niile kwesịrị ibido rụtụ aka n’ihe na-abịanụ.
N'ihe banyere edemede ahụ… Google agbachaghị JC Penny. Ọhụrụ
York Times mere. Google emeghị ihe ọ bụla ruo mgbe ndị nta akụkọ chọtara ya.
Ihe dị iche bụ blọọgụ PR dị elu dị elu na ụlọ ọrụ
nrụtụ aka na ọtụtụ puku njikọ na-adịghị mkpa.
Ihe anyị kwesịrị iche banyere bụ usoro na - esote mmalite nke SEO.
Google ga-atụba ọdịnaya nbudata tupu ha zoo
isiokwu na blọọgụ - na n'ọdịnihu dị nso.
Feb 20, 2011 n’elekere 12:32 nke abali
The New York Times kpughere ya, mana ọ ka bụ Google nke liri JC Penney ozugbo ọ nwere ihe akaebe. Ka m na-ekwupụta na post ahụ, nke ahụ bụ ụjọ na-atụ ụjọ ebe ọ bụ na enweghị ihe akaebe na-ejikọ backlinks ozugbo na JC Penney. Nke ahụ pụtara na ụlọ ọrụ ndị ọzọ SEO nwere ike itinye ụdị aghụghọ ahụ iji mebie aha na ọkwa nke ndị asọmpi ha. You naghị eche na Sears na ụlọ ọrụ ndị ọzọ chọtara onwe ha na ọnọdụ # 1 anaghị enweta uru ọ bara?
Kedu ihe kpatara David Segal, New York Times, ji họrọ JC Penney? Ikekwe ọ bụ aha sitere na onye asọmpi?
Feb 20, 2011 na 3:59 PM
SEA dika ị na-akpọ ya, ọ nọwo na-adịru nwa oge… Echetara m na a na-atụle ya na isi SEO ọgbakọ na 2008 (ọ bụghị dị ka atụmatụ ziri ezi, mana dị ka ụzọ eji egwu egwu egwuregwu sistemụ).
Feb 20, 2011 na 5:20 PM
Paul, Anụla m mgbe niile asịrị mana nke a yiri ka ọ bụ ihe izizi izizi ebe Google gosipụtara ihe emere. You nwere ihe atụ?
ala na-agbanye radar
Feb 21, 2011 na 1:52 PM
Usoro a bụ ihe iwu kwadoro na mpaghara ọ bụla nke ụwa a na-eme iji kwalite gị isiokwu na engines ọchụchọ, njikọ azụ yana mkpụrụ okwu arịlịka sitere na ngalaba ndị ọzọ bụ usoro dị irè iji wulite njikọ ma kwalite weebụsaịtị gị mana ugbu a enwere m mgbe niile iyi egwu nye onye ọ bụla na-eme SEO maka azụmahịa ha na Google nwere ike ime ihe ọ bụla oge na azụmahịa ha.
Ọkt 15, 2011 na 10:54 AM
Ogologo oge ole ka anyị ga-ahụ iwu megide asọmpi saịtị na-ebo ha ebubo banyere SEA? Ugboro ole ka anyị ga-ahụ tupu a gafee iwu iji gbochie omume ahụ.
Jul 23, 2012 na 6:56 PM
Iji gbakwunye mkparị na mmerụ ahụ, onye nchoputa ha na-enwu enwu na-esutu ọnụ nke Google mgbe niile ma were banyere aghụghọ SEO ụlọ ọrụ bụ - niile ka ọ na-azụ azụlinks. ”
Echere m na ama m onye ị na-ekwu maka ya 😉